Herinaratra: azo atao ny tohodrano lehibe amin’Ikopa | NewsMada
Herinaratra: azo atao ny tohodrano lehibe amin’Ikopa
Vahaolana maharitra hiatrehana ny delestazy eto amintsika ny fananganana tohodrano mamokatra herinaratra. Nilaza ny minisitry ny Angovo sy ny akoranafo, Rasoloelison Lantoniaina, omaly, fa manodidina ny 230 Mw ny filàna herinaratra eto Antananarivo ka mamatsy ny 50% azy ny avy amin’ny tohodrano, raha ampy tsara ny rano. Azon’ny fanjakana atao tsara ny manangana fotodrafitrasa goavana, toa an’Andekaleka, raha mahita vola izy. Anisan’izany ny amin’ny reniranon’Ikopa, ahafahana mamokatra hatrany amin’ny 600 Mw. Efa misy ny fifanarahana amin’ny tsy miankina, hividianana ny herinaratra, toy ny any Ivolobe (Toamasina) sy ny any Sahofika (Antsirabe-Ambositra). Saingy ny tsara indrindra, ny fanjakana mihitsy no manangana mivantana ny fotodrafitrasa toy ny any Andekaleka.
Mahavariana fa toy ny any Sahofika Antsirabe (192 Mw), mamatsy vola 797 tapitrisa euros ny fananganana azy ny Banky iraisam-pirenena, izany hoe, vola indramina, saingy orinasa tsy miankina ny mitantana sy mamokatra ny herinaratra.
Ankoatra ireo, olana diavin’ny fanjakana ny tsy nahafahana nandoa ara-potoana ny vidin-tsolika vatsin’ny orinasa tsy miankina. Manodidina ny 55 miliara Ar isan-taona ny vola lany amin’izany, avy amin’ny fanjakana.